ပန်းရောင်ပါးဖောင်းဖာင်းလေးနဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး အလား ဆွဲဆောင်မှုအပြည့် ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ‘ခင်သဇင်’ – Shwe Naung
ပန်းရောင်ပါးဖောင်းဖာင်းလေးနဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး အလား ဆွဲဆောင်မှုအပြည့် ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ‘ခင်သဇင်’
N N | January 8, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ် ကြီးရေ ဒီတစ်ခါမှာ တော့ နိုင်ငံခြား သူလေးလို ဆွဲဆောင်မှု တွေရှိနေပြီး တစ်မျိုးလေး ဆန်းသစ်တဲ့ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းဆန်း တွေနဲ့ သူလေး ကတော့ ပရိသတ် အချစ်တော်လေး ခင်သဇင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ များစွာကို ရိုက်ကူးနေပြီး ခပ်မိုက်မိုက် အခန်း တွေမှာ လည်းပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင် နိုင်သူတစ်ယောက် လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အပြုံးလေး တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထား သူလေးကတော့ မင်းသမီး ချောခင်သဇင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာ လည်းဘိုဆန်တဲ့ ဆံပင် အရောင်လေးနဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး အလား ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိလှပနေ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆီပိုတွေမရှိပဲ သွယ်လျလှပ တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေး ကြောင့်လည်း မိန်းကလေးတိုင်း အားကျနေရသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြူဖွေးဝင်းဥ နေတဲ့ အသားရေ လေး ကြောင့်လည်း ဘာလေး၀၀တ် ဝတ်လိုက် ဖက်နေပြီး ဖက်ရှင် များကလည်း ခေတ်ရေ စီးကြောင်းနှင့် အညီခေတ်မှီ နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်သဇင်က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာပေါ်မှာ လည်းချစ် ပရိသတ်တွေ အတွက် လှပတဲ့ပုံ လေးတွေ ကို အမှတ်တရ တင်ပေးလေ့ရှိပြီး ဒီနေ့မှာလည်း” ကြယ်တွေစုံတွေည … အတူတူကြည့်မယ် ” ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ် လေးနဲ့အတူ ချစ် ပရိသတ် တွေအတွက် ပုံလေးတွေ ကိုမျှဝေ ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ကဲ…..ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ခင်သဇင် ရဲ့ပုံလေးတွေ ကို ကြည့်ရှု့လို့ရ အောင်ပြန်လည်ဖော် ပြပေး လိုက် ပါတယ်နော်။
Photo Credit- Khin Thazin (FB Page)
သဇင်ဦးရဲ. အမိုက်စား ပုံရိပ်များ….
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းများကို ပရိသတ်တွေ မြင်သာအောင် ချပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာ၀င့်ကျော်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
နွယ်နွယ်ထွန်း ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…..
ကိုယ့်ဘာသာအေးဆေးမနေဘူး ဖုန်းလိုက်ဆက် အကြောက်တရား လိုက်ထည့် နေသူတွေ အကြောင်းအား ပြောပြ လာတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်…